प्रिन्ट संस्करण - मिस यु अनिल - हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
मिस यु अनिल
- हिमेश, काठमाडौं
मंसिर १, २०७४-जत्तिकै राम्रा खेलाडी किन नहोस्, आफ्नो खेल जीवनबाट विरलै उत्तिकै राम्रो बिदाइ पाइन्छ । आफ्नो खेल जीवनका सुरुआतलाई लिएर त ‘स्क्रिप्ट’ लेख्न सकिएला, तर संन्यासलाई लिएर सकिन्न । यो अर्थमा अनिल गुरुङ निकै भाग्यमानी रहे । एसियन कप २०१९ छनोटमा फिलिपिन्सविरुद्ध सातदोबाटोमा भएको खेलसँगै उनले घोषणा गरे, ‘अब म अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्दिनँ ।’ अर्थात् अब उनी फेरि दोहोर्‍याएर नेपालको जर्सीमा देखिने छैनन् ।
अनिल केही समययता यस्तै संन्यास लिने राम्रो अवसरको खोजीमा थिए । राष्ट्रिय टिममा पनि नियमित पर्न छाडेका थिए । उनलाई थाहा भइसकेको थियो, अब लामो समय खेल्न सकिन्न । संन्यास अनि ५० क्यापको उपलब्धि, अवसर वास्तवमै सुन्दर थियो । नेपालको राष्ट्रिय टिमका लागि धेरै कमले मात्र यति खेल्न पाएका छन् । यस्तोमा अनिल फेरि भाग्यमानी रहे ।
वास्तवमा अनिल निकै भाग्यमानी खेलाडी हुन्, जसको यात्रा धेरै अर्थमा सुमधुर नै रह्यो । किन त ? यसका लागि फ्ल्यास–ब्याकमा जानुपर्ने हुन्छ, सन् २००७ अक्टोबर ८ तिर । त्यति बेला विश्वकप छनोट चलिरहेको थियो र नेपालको प्ले–अफमा प्रतिद्वन्द्वी थियो, ओमान । र, नेपाली टिमका प्रशिक्षक थिए, उनै श्याम थापा । ओमानविरुद्ध मस्कटको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा अनिलले डेब्युको अवसर पाए, त्यो पनि स्टार्टिङ लाइन अपबाटै । अब के चाहियो र ? उनले त्यसयता पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । उनी चाँडै नेपाली टिमका स्थापित नाम भए ।
यो खेलको ठीक अगाडि प्रशिक्षक थापाले अनिललाई डेब्युको अवसर दिने क्रममा भनेका थिए, ‘यो केटोले केही गर्छ ।’ त्यो समय एन्फा एकेडेमीको पहिलो ब्याचको बिगबिगी थियो । पूरा टिम लगभग यही ब्याचको जस्तै थियो । तर यो ब्याचसँग त्यस्तो फरवार्ड थिएन, जसले अनिललाई टक्कर दिन सकोस् । अनिलले जति बेला खेल्न सुरु गरेका थिए, त्यसको ठीक अगाडि वसन्त थापाले खेल्न छाडेका थिए । भाग्यले अनिललाई यति बेला साँच्चै साथ दिएको थियो ।
फेरि वसन्त र अनिलमा धेरै समानता पनि छन् । खासमा वसन्तपछि फरवार्डमा खेल्ने खेलाडीमा सबैभन्दा ठूला स्टार कोही भए भने ती अनिल नै हुन् । घरेलु फुटबलमा मनाङ–मस्र्याङ्दीसँग एक खास ठूलो स्टार खेलाडी हुन्छ । वसन्तपछि यही क्रम अगाडि बढाउने काम पनि त अनिलले नै गरे । अनिल पोखरेली हुन्, यो सबैलाई थाहा छ । अनि सबैलाई थाहा भएको के पनि हो भने उनलाई यहाँसम्म पुग्न कसैले सबैभन्दा बढी मद्दत गरेको छ भने त्यो पनि पोखरेली नै हो ।
चाहे त्यो पर्दा पछाडिबाट होस् अथवा पर्दा अगाडिबाट । उनको जीवनमा साथ दिने खास–खास व्यक्तिहरू छन्, जसलाई अनिलले भुल्न सक्ने छैनन्, चाहे उनीहरू अनिलको जीवनबाट अचेल टाढा नै किन नहोस् । सहारायता घरेलु फुटबलमा उनको पहिलो क्लब बीबीसी हो । त्यति बेला बीबीसी प्राय: रेलिगेसनबाट बच्न संघर्ष गर्ने क्लब थियो, यहींबाट खेलेर अनिलले आफ्नो पूरा खेल देखाउने अवसर पाए । सुरुमै ठूला क्लबबाट खेलेका भए, अनिल हराउने पो थिए कि ?
आखिरमा अनिलले बीबीसीका लागि त्यस्तो खेल देखाए, जसको पछि ठूला क्लब आफैं उनको पछाडि लागे । त्यसैले त अनिलले थ्रीस्टारबाट खेले, मनाङ–
मस्र्याङ्दीबाट पनि खेले । अनि एक समयको खर्चिलो एनआरटीबाट पनि । भारतको आई लिगमा खेल्न पाउने केही भाग्यमानी खेलाडीमा पनि पर्छन्, उनी । सन् २००९–१० को सिजनमा उनले सिलोङ लाजोङबाट खेले र तहल्का नै मच्चाए । उनले त्यति बेला राम्रो अफर पाएका थिए ।
फेरि एकपल्ट अनिलको भाग्य चम्किएको अवसर थियो । भारतमा खेलेर फर्केयता उनीसँग कार हुने गथ्र्यो । अभ्यासका बेला उनी कार चढेर आउने गर्थे । नेपाली फुटबलमा यसले एकखाले ‘स्टारडम’ ल्याएको थियो । अनिलको जमानामा अरू दुई फरवार्ड पनि चर्चामा आउने गर्थे, जुमनु राई र सन्तोष साहुखल । उनीहरू दुवै अनिल जत्तिको टिक्न सकेनन् । जुमनु आफैं एक समय खुबै राम्रो लयमा थिए, त्यसले पनि अनिललाई फाइदा नै गरेको थियो ।
फेरि नेपालको राष्ट्रिय टिमकै प्रसङ्गमा फर्कने हो भने उनले आफ्नो पहिलो गोलका लागि अरू कुनै सहर होइन, पोखरा नै रोजे । त्यति बेला पाकिस्तानविरुद्ध दुई खेलको मैत्रीपूर्ण शृंखला चलेको थियो । अनिलले नेपालका लागि तेस्रो खेल मात्र खेल्दै पहिलो गोल गरे र समय थियो, ८५ औं मिनेट । यो अवसर अनिललाई राम्रोसँग याद होला पनि । आखिरमा अनिलले नेपालका लागि गरेका सबै नौ गोलबारे खुबै याद राखेका छन्, बल कसरी आफूसम्म आयो, कसले थियो अनि आफूले कसरी त्यसलाई पोस्टको दिशा दियो भनेर ।
अनिलले गरेका यी नौ गोलमध्ये सम्भवत: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गोल सन् २०१३ को साफ च्याम्पियनसिपमा भारतविरुद्ध थियो । उनले ६९ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए र यसै गोलले भारतमाथि ऐतिहासिक जित सम्भव भएको थियो । त्यसको तीन दिन अगाडि उनले नै १८ औं मिनेटमा बंगलादेशविरुद्ध प्राप्त जितमा पहिलो गोल गरेका थिए । यो हेडर गोल भने अनिलको आफ्नै ‘पर्सनल बेस्ट’ रह्यो किनभने उनकै भाषामा यो कठिन परिस्थितिमा सम्भव भएको थियो ।
अन्त्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अनिल वास्तवमै किन विशेष छन् त ? यसको पहिलो उत्तर हो, उनी मैदानमा शतप्रतिशत दिन्छन् । बललाई ‘चेज’ गर्न उनी कहिल्यै पछाडि पर्दैनन्, जति समय मैदानमा हुन्छन्, पूरा–पूरा सक्रिय हुन्छन् । गोल गर्ने क्षमता उनमा छ, यो सबैलाई थाहा भएकै भयो । मैदान बाहिर अनिल वास्तवमै ‘जेन्टलम्यान’ हुन्, मीठो बोली र व्यवहार । यही त अब नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट देख्न नपाइने भयो । भन्नै पर्छ, ‘वि विल मिस यु अनिल ।’
प्रकाशित: मंसिर १, २०७४
जोडिए समुदाय ›
युट्युबमा पनि स्टोरिज मंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
गुगलको डाटाल्लीमंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
फ्रेमबिनाको फोनमंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
ब्याटल अफ डीजेमंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
राजनीति चासोमंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
वेटर ‘एमी’मंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बुबाकै पथमंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
विरोध कि समर्थन ?मंसिर २२, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
निर्मात्री होड मंसिर १५, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
सुरक्षा किन फितलो ? मंसिर १६, २०७४पूरा पढ्नुहोस् »